जब बच्चाहरूले गाईको दुध पाउन सक्छन्? - PAMPEREDPEOPLENY.COM - गर्भावस्था-प्यारेन्टिंग
बच्चा खाना: कहिले र कसरी तपाईंको शिशुलाई गाईको दूध परिचय गर्ने?
घर गर्भावस्था प्यारेन्टिंग बच्चा बेबी ओआई-नेहा घोष द्वारा नेहा घोष नोभेम्बर २, २०२० मा
एकचोटि तपाईंले स्तनपान सुरु गर्नुभयो, सायद तपाईको दिमागमा धेरै प्रश्नहरू हुन सक्छन् जस्तै तपाईले कहिले स्तनपान गर्नुहुनेछ र कहिले तपाईले गाईको दुध तपाईको सानो बच्चालाई दिनु पर्छ? ठीक छ, हामी यो लेख मा तपाइँको लागि सबै कभर भयो।
आमाको दूध बच्चा जन्माएपछि पोषणको उत्कृष्ट स्रोत हो जुन उचित विकास र विकासको लागि महत्वपूर्ण छ यसले प्रतिरोधात्मक क्षमता मजबूत गर्दछ र संक्रमणबाट बचाउँछ।  । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) सिफारिश गर्दछ कि शिशुहरुलाई पहिलो छ महिनाको लागि स्तनपान गर्नु पर्छ र स्तनपानको साथसाथै दुई वर्ष उमेर वा सो भन्दा बढि पौष्टिक पूरक खानाहरू प्रदान गर्नु पर्दछ। [दुई] ।
त्यसोभए, कहिले र कसरी तपाइँ तपाइँको बच्चालाई गाईको दूध परिचय गर्नुपर्छ? पत्ता लगाउन को लागी पढ्नुहोस्।
जब बच्चाहरूले गाईको दुध पाउन सक्छन्?
विभिन्न देशहरूमा, शिशुहरूले गाईको दूध पिउनु पर्दछ जुन उमेरमा भिन्नताहरू छन्। उदाहरण को लागी, अमेरिका र युके मा, यो सिफारिस गरिन्छ कि शिशु एक बर्ष भन्दा पहिले सम्पूर्ण गाईको दुध दिनु हुँदैन। डेनमार्क र स्विडेनमा, सिफारिस गरिन्छ कि सम्पूर्ण गाईको दुध क्रमशः and र १० महिना देखि शुरू गर्नुपर्दछ। यद्यपि, धेरै देशहरूले बच्चाको १२ महिनाको उमेर हुँदा गाईको दूध खुवाउने सल्लाह दिन्छन् ]
अमेरिकन एकेडेमी अफ पेडियाट्रिक्सले सिफारिस गर्दछ कि शिशु एक बर्ष नहुन्जेल सम्पूर्ण गाईको दुध दिनु हुँदैन ] ।
जीवनको पहिलो वर्षको समयमा किन गाईको दूध दिइनु हुँदैन?
अध्ययनहरूले देखाउँदछ कि सम्पूर्ण गाईको दुधमा उच्च केसिन सामग्री हुन्छ जुन खान्दा शिशुहरूलाई पचाउन गाह्रो हुन्छ। थप रूपमा, गाईको दुधमा भिटामिन सी, भिटामिन ई, जिंक र नियासिनको एकदम कम मात्रा हुन्छ। यसमा कम लिनोलिक एसिड सामग्री पनि छ जुन करीव १.8 प्रतिशत छ, जुन सिफारिस गरिएको स्तरभन्दा कम हो जुन करीव per प्रतिशत छ। ] ।
एक अनुसन्धानका अनुसार छ महिनामा शिशुलाई गाईको दुध परिचय गराउँदा आइरनको कमी एनीमिया हुने खतरा एक बर्षको उमेरमा बढ्न सक्छ। जीवनको पहिलो दुई बर्षको अवधिमा फलामको अभावले प्रतिकूल व्यवहार र साइकोमोटर विकासलाई असर गर्न सक्छ ] , ] ।
पूरै गाईको दुधमा पाइने प्रोटिन, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड र फास्फोरसको अधिक सेवनले रेनल घोल भारलाई बढाउँदछ, जसले गर्दा पिसाब अस्थिरता हुन्छ ] ।
र गाईको दुधमा प्रारम्भिक संपर्कले एलर्जीको जोखिम बढाउन सक्छ ] । अर्को अध्ययनले देखायो कि शिशुलाई गाईको दुध दिएमा आन्द्रामा रक्तस्राव हुन सक्छ  ।
तपाईंको शिशु एक बर्ष पछि भयो, गाईको दूध परिचय गर्न सकिन्छ। जे होस्, शिशुलाई गाईको दुध दिने सम्बन्धमा तपाईंको बाल रोग विशेषज्ञको परामर्श लिनुहोस्।
कसरी तपाईंको शिशुलाई गाईको दूध परिचय गर्ने?
यहाँ केहि सुझावहरू छन् शिशुलाई गाईको दुध प्रदान गर्नका लागि:
आधा गाईको दुध र आधा आमाको दूध मिक्स गर्नुहोस् र तपाईंको बच्चालाई बिस्तारै स्वादको लागि प्रयोग गर्न दिनुहोस्। दैनिक sips दैनिक सुरू गर्नुहोस्।
तपाइँको बच्चालाई चिसो गाईको दूध दिनुहोस् र चिसो छैन। तपाईंले आफ्नो बच्चालाई दिने गाईको दूध पाश्चराइज र बाँझी हुनुपर्दछ।
नियमित कपमा गाईको दुध प्रस्ताव गर्नुहोस् किनकि यसले तपाईंको बच्चालाई कसरी पिउने कुरा सिक्न मद्दत गर्दछ।
गाईको दुध तपाईंको बच्चाको खाना योजनाको एक हिस्सा हुनुपर्छ। तपाईंको बाल रोग विशेषज्ञले यसलाई खानाको भाग बनाउने सल्लाह दिन सक्छ।
Others आमाको लागि विभिन्न स्तनपान स्थितिहरू
तपाईंको बच्चाले कति गाईको दूध पाउन सक्छ?
अमेरिकन एकेडेमी अफ पेडियाट्रिक्सका अनुसार, बच्चाहरूमा दिनको लगभग दुई सर्ईहरू गाईको दुध हुनुपर्दछ। र दुईदेखि तीन वर्ष बीचका बच्चाहरूले दिनको २. serv सर्भ गाईको दूधको उपभोग गर्नुपर्छ [एघार] ।
Q. यदि तपाईले बच्चाको गाईको दुध चाँडै दिनुहुन्छ भने के हुन्छ?
TO गाईको दुधमा प्रारम्भिक संपर्कले दूधको एलर्जी, फलामको अभाव रक्ताल्पता र आन्द्रा रक्तस्राव निम्त्याउन सक्छ।
Q. के मैले गाईको दुधलाई बच्चामा दिनु भन्दा पहिले उमाल्नु पर्छ?
TO हो, गाईको दुध उमालिनु पर्छ तपाईले यसलाई आफ्नो बच्चालाई खुवाउनु अघि।
बुद्धिमान बच्चाको लागि गर्भावस्थामा पढ्नको लागि पुस्तकहरू
कसरी एकै महिनामा छ प्याक पेटहरू प्राप्त गर्ने
महिला राम्रो वा नराम्रोको लागि बाँया आँखा झिम्कने
फलहरु मधुमेह टाइप २ बाट बच्नका लागि